Akube nokuzwana nokusizana emaqenjini aKwaZulu-Natal ukuze likhule ibhola kulesi sifundazwe - Impempe
Akube nokuzwana nokusizana emaqenjini aKwaZulu-Natal ukuze likhule ibhola kulesi sifundazwe
March 4, 2021 Impempe.com
Umhleli weMpempe, uSihle Ndlovu
Ngihlale ngizibuza ukuthi kungani omakhelwane abaningi bengezwani nhlobo, ikakhulukazi uma kukhulunywa ngabantu abamnyama.
Uzwe isimanga nje ukuthi omakhelwane babanga ukuthi ingane yakomunye umakhelwane isithole iziqu ezithile. Kwesinye isikhathi uzwe kuthiwa omakhelwane abasabhekani nhlobo ngoba nakhu ingane yakomunye umakhelwane ithenge imoto.
Omunye umngani wami wake wangitshela ukuthi kubo abezwani nomakhelwane ngoba izingane zakwakhe ziyaphuza, azimenzeli lutho. Kuluma kuqaqambe uma ebona izingane zakwamakhelwane zenzela abazali bazo izinto ezinkulu ngoba zona azilibali amambawu. Yini nje yonke le?
Singabantu kumele sifunde, futhi sikufake emakhanda ukuthi izinto zethu ngeke zenzeke ngendlela efanayo ngoba asiphiwe ngokufana. Nezingane zethu ngeke ziphumelele ngendlela efanayo ngoba azinawo amakhono afanayo, futhi azicabangi nhlobo ngokufana.
Njengamanje kumnandi kakhulu ukubona amaqembu aKwaZulu-Natal adlala kwiDStv Premiership, iLamontville Golden Arrows naMaZulu FC, benza kahle emidlalweni yeligi. Ngokwami nje la maqembu kumele ajabulelane futhi esekane njengoba izinto ziwahambela kahle. Kubi nokho ukuthi izinto azihambi kahle neze kwiMaritzburg United, ezabalaza kanzima ngasekugcineni kwi-log yePremiership.
Ngake ngezwa omunye umlandeli weqembu laKwaZulu-Natal ekhuluma inqaba nje ngelinye iqembu lakusona lesi sifundazwe. Lo mlandeli wayethi ufisa leli qembu ayekhuluma ngalo lidliwe yizembe futhi lingaphinde nje libuyele esigabeni esiphezulu. Engasala ngizibuza kona ukuthi yikuphi lapho ayehlephuka khona ngoba nakhu leli qembu lidlala esigabeni esiphezulu, ebe engelona umlandeli walo?
Mina ngihlale ngifisa ukuthi wonke amaqembu aKwaZulu-Natal enze kahle ngoba lokho kusuke kusho ukuthi sizoba nemidlalo eminingi kulesi sifundazwe, ikakhulukazi uma singekho lesi simo esibhekene naso seCoronavirus. Empeleni nje kimina kwehla kahle kakhulu ukubona iRichards Bay FC yenza kahle kwiGladAfrica Championship.
Kungaphinde kuthi cosololo uma leli qembu, elisanda kubukisa ngeKaizer Chiefs kwiNedbank Cup Last 32, linganyukela kwiPremiership ukuze kube namaqembu amaningi azodlala esigabeni esiphezulu KwaZulu-Natal. Kubukeka kuthembisa kakhulu ngoba kumanje iRichards Bay iqhwakele kwi-log yeChampionship ngemuva kwemidlalo engu-15.
Angazi ichazwa kanjani eyokuzondana kwamaqembu adlala esigabeni esikhulu asesifundazweni esisodwa. Kumele ngabe uBenni McCarthy, ocija Usuthu, uke ahlale nje noMandla Ncikazi, oqeqesha Abafana Bes’thende, kubhungwe ngonobhutshuzwayo bebe bephunga itiye. Angazi ngoba angikho ezingeni labo, mhlawumbe bayakwenza lokhu.
Empilweni nje okubalulekile okumele sikwazi ukuthi umgolo awubuyiseli ngalutho. Ukuba nemoto kwengane kamakhelwane kumele kungijabulise ngoba ngelinye ilanga leyo moto iyosiza mina sekuphuthuma. Owenza kahle kumele ashayelwe ihlombe, angafiselwa okubi. Uma sikhona isidingo ungamane uhlale phansi naye akucebise ukuthi yini ayenzayo ukuze aphumelele.
Akube khona ukuzwana nokusizana emaqenjini aKwaZulu-Natal ukuze likhule ibhola kulesi sifundazwe. Lokhu kuyogcina kusize inqwaba yezingane ezinekhono ezifisa ukudlala unobhutshuzwayo esikhathini esizayo. Shwii!!
Previous Previous post: Ziyamvuma izinto uBavuma osengukaputeni wamaProteas
Next Next post: Usola ukubukelwa phansi komuntu omnyama kwabagxeka ukwesekwa kukaMotsepe yiFIFA okhethweni lweCAF